Topnepalnews.com | सहयोगमा सुत्केरीको ज्यान बाँच्यो । तर घर फर्कने कसरी ?
सहयोगमा सुत्केरीको ज्यान बाँच्यो । तर घर फर्कने कसरी ?
Posted on: February 17, 2017 | views: 615
नन्द ऋषि जैसी-मुगु ।
सुत्केरी व्याथाले थलिएको चार दिन पछि दशौ सन्तानकी आमा रिउलि जैसीको फेजनेपाल नामक सँस्थाले ज्यन बचाइदिएको छ । नत नजिक अस्पताल नते आर्थिक सार्मथ्यता । नेपालको अति दुर्गम मुगु जिल्लाको धैनकोट गा.वि.स. स्थित दइगाँउका पुन्न प्रसाद जैसीमाथि काहाली लाग्दो वज्रपात हो यो ।
प्रसव पिडा र अत्याधिक रक्तस्रावका कारण ओछ्यानमा छटपटाइ रहेकी श्रीमतिलाई छेउमा बसेर टुलुटुलु हुर्नु सिवाय अन्य विकल्प केही थिएन पुन्न प्रसाद सँग । मुगु जिल्लाकै गरिवको सुचिमा समावेस छन पुन्न प्रसाद जैसी ।
छोरा पाउने आसाले यो पटक दशौ सन्ताको रुपमा जन्माउन लागेका थिए तर सोचे जस्तो हुन नसकेपछि पिडा माथी बज्रपात भएको छ । तर भएको बच्चा पनि अस्पताल पोखरा गण्डकी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पुगेर अप्रेसन पछि मरेको बच्चा जन्मेको छ ।
घरमा खानलाउन केही छैन नौजना छोरी पालो पैचो गरेर बाँचेका छन । त्यसैमाथी अरुबेला जस्तो दशौ सन्तानको बेला आफै बच्चा जन्माउन सकीनन् रिउलि ले । चारदीन सम्म व्याथा लाग्यो सहयोगको आसा नै गरेका थिएनन् आफै भन्छन यो सँस्थाले कसरी यति ठुलो सहयोको हात फैलायो किन सहयोग गर्यो मलाइ थाहा छैन मलाई ।
हेलीकप्टर गाँउमै बसालेर फेजनेपालले सुत्कीको उपचारकोलागी पोखरा पगाएको छ ।
मुगु जिल्लामा सामाजिक परिवर्तन रुपान्तरणको लागी कार्यरत फेजनेपाल नामक गैर सारकारी सँस्थाको पहलमा हेलिकप्टर चाटर गरेर मृत्युसँग लडिरहेकी ४८ वर्षीया सुत्केरी श्रीमती रिउली जैसीको ज्यान जोगिएको छ ।
फेज नेपालको पहलमा पोखराको गण्डकी उपक्षेत्रीय अस्पता पु¥याएर शल्यक्रिया गरी रिउलीको पेटभित्रको मृत बच्चालाइ निकालेपछि रिउलिको ज्यान बचेको हो ।
हेलिकप्टर गाँउमा पुगुन्जेल सम्म घरमा धामी,झाँक्रि गदै राखिएको थियो ।
आर्थिक समस्याका कारण रिउलिलाई अस्पताल लैजान र उपचार गराउन नसकिएको खवर फेजनेपाल ले पाएपछि आफ्नै पहलमा सँस्थाले हेली कप्टर चाटर गरेको हो ।
अहिले पोखरा उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । तर विरामिको पिडा एकातिर छ भने अर्को तिर कसरी घर फर्कने पिडाले आकुल व्याकुल भएका छन पुन्न प्रसाद जैसी । सहयोगको याचनामा बाँचेका छन ।